Inona no tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Inona no tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly. Koa satria eto amin'ity tontolo ity ny zanak'olombelona dia nanontany tena izy inona ny dikan'ny fisiany. Izy io angamba no lehibe indrindra tsy fantatra amin'ny fiainantsika. Biby mandinika isika ary noho izany dia mila mikaroka isika valiny manoloana io zava-misy io amin'ny alàlan'ny lalàn'ny antony sy vokany.
Na izany aza, na dia maro aza ny olona mandehandeha amin'ny fiainana nefa tsy mahalala tsara ny fomba hiainana azy na tsy misy tanjona tena izy, ho an'ny Kristiana tsirairay, manana valiny mazava ity fanontaniana ity. Manana trosa fotsiny isika mamaky sy manadihady ny Baiboly hahalala azy.
1 Inona no tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly: Fanazavana amin'ny andalan-teny
2 Ahoana no fanatanterahana ny tanjona tsy andefasan'Andriamanitra
Inona no tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly: Fanazavana amin'ny andalan-teny
Tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly
Milaza izany ny Baiboly ny tena tanjon'ny fiainantsika dia mifototra amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Noforoniny hidera azy sy hanana fifandraisana Aminy isika amin'ny alalàn'i Jesosy no ahitantsika ny dikany amin'ny fiainana.
ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika tao amin'ny Malala.
Efesiana 1: 5-6
Andriamanitra no Mpamorona ny fiainanaIzay no maha manome lanja ny fiainana azy. Andriamanitra no namorona antsika ho fiderana. Namolavola antsika tamin'ny fomba manokana Izy hanehoany ny voninahiny sy ny fitiavany amin'ny alalantsika. Io no dikany lehibe amin'ny fiainana.
Hanaja ahy ny bibidia sy ny amboadia ary ny ostritsa; Fa hanome rano any an'efitra Sy ony mitokana aho mba hosotroin'ny oloko voafidiko.
Ity tanàna noforoniko ho ahy ity; hivoaka ny fiderana ahy.
Isaia 43: 20-21
Ny hany zavatra afaka mameno ny banga eo amin'ny fiainana dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra »... by satria samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nohamarinina tamin'ny fahasoavany, tamin'ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy»Romana 3: 23-24. Ao amin'Andriamanitra no ahitantsika fiadanam-po sy fahafaham-po ary fahasambarana. Tsy misy zavatra hafa afaka manome ny tena dikany ny fiainana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia manome fiainana misy dikany.
Noho ny fahotana dia nivadika tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ny ota dia mamela banga be ao am-pontsika, satria mampanalavitra antsika amin'ireo manome dikany ny fiainantsika izany. Miezaka mameno ny banga amin'ny zavatra hafa isika, toy ny vola, fianakaviana ary fahombiazana, saingy tsy mahafapo anay tanteraka ireo zavatra ireo. Andriamanitra irery no manome dikany ny fiainana.
Dia nijery ny asa-tanan'ny tànako sy ny asa nanatanterahako azy aho; ary, indro, zava-poana sy misambo-drivotra foana izy rehetra, nefa tsy mahasoa ambanin'ny masoandro.
Mpitoriteny 2: 11
Tonga Jesosy mba hananantsika fifandraisana amin'Andriamanitra indray. Teo amin'ny hazo fijaliana dia nandray ny sazy noho ny ota. Ankehitriny, ireo izay mibebaka amin'ny fahotany sy manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy azy dia tafaray amin'Andriamanitra indray. Misy dikany ny fiainana!
Ahoana no fanatanterahana ny tanjona tsy andefasan'Andriamanitra
Andriamanitra no manome dikany ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny fiainana. Rehefa mametraka an'i Jesosy ho kompas 'avaratra' isika dia tsy diso fanantenana ary Amin'ny alàlan'ny fitarihanao no ahafahantsika manatratra zavatra lehibe. Ireo izay tia an'i Jesosy dia manana tanjona lehibe, izay manome lanja sy dikany ny fiainana eto an-tany, noho izany dia tsy maintsy:
Ankatoavy Andriamanitra: Ny didin 'Andriamanitra dia tsara ary Manampy antsika hiaina amina tanjona iray izy ireo.
Ny fiafaran'ny lahateny rehetra re dia izao: Matahora an'Andriamanitra, ka tandremo ny didiny; satria izany dia ny olombelona manontolo.
Mpitoriteny 12: 13
Torio ny filazantsarany. Toy izany koa hanampy olon-kafa ianao hahitana ny dikan'ny fiainana.
Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina; mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiako anao; ary indro, momba anao isan'andro aho mandra-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amena. Matio 28: 18-20
Ankafizo ny fiainana: raha tsy misy Andriamanitra, ny fahafinaretana amin'ny fiainana dia tsy mahavita antsika; fa, miaraka amin'Andriamanitra, afaka mahita ny tena fahafaham-po isika amin'ny zavatra tsara rehetra omen'Andriamanitra antsika, na dia ny tsotra indrindra aza.
Ary, indro, izao ny soa efa hitako: tsara ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny asan'ny asanao rehetra, izay reraky ny tenanao atỳ ambanin'ny masoandro, amin'ny andro rehetra hiainanao izay nomen'Andriamanitra anao. ; satria anjaranao ity.Toy izany koa, ho an'ny olona rehetra omen'Andriamanitra harena sy fananana ary manome hery azy hihinana amin'izy ireo sy handray ny anjarany ary hankafy ny asany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Mpitoriteny 5: 18-19
Tiavo ny hafa: Ny fitiavana ny olon-kafa dia manome lanja kokoa ny fiainana, rehefa tia ny mpiara-belona amintsika isika Fikasan'Andriamanitra.
Ary tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany no didy lehibe. Ary ny faharoa dia mitovy amin'izany: ho tianao ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy baiko hafa lehibe noho ireto. Marka 12: 30-31
Mihabetsaha ary manapaka ny tany: maha-ankohonana, miasa sy mikarakara izao tontolo izao dia zavatra tena tsara izay mandray ny tena heviny ao amin'i Jesosy izy ireo.
Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitso-drano azy ka nanao taminy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha; fenoy ny tany, ka mampandroa azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Genesisy 1: 27-28
Rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra voalohany isika dia omeny antsika ny zavatra hafa rehetra. Rehefa manaiky ny fitiavan'Andriamanitra isika dia misy dikany mazava ny fiainana. Noho ireo dia very tahotra isika ary mampitombo ny fahatokiantsika azy.
Tahaka ny ananantsika fotoam-pifaliana sy fahasarotana, dia hiaina fotoana sarotra koa isika. Ny mahasamihafa azy dia ny zavatra inoantsika. Rehefa mino an'i Jesosy isika dia manomboka miatrika olana amin'ny fihetsika hafa. Nilaza i Jesosy fa hanana fijaliana sy fahasahiranana isika, saingy nandresy Izy el tontolo ary eo anilantsika, noho izany tsy misy atahorantsika.
Izany no izy! Manantena izahay fa nanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity inona no tanjon'ny fiainana araky ny Baiboly. Raha manontany tena ianao ahoana no ahalalanao fa momba anao Andriamanitra, manohy mizaha Discover.online.
Ahoana no fomba hamonjy azy araka ny Baiboly